ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့် (Taxonomic rank) သည် ဇီဝဗေဒ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း ထက်​အောက်စဉ်စနစ်မှ မျိုးခွဲပညာရှင် (taxonomist) တို့မှ တက်ဆွန် (taxon)ဟုခေါ်သော သက်ရှိအုပ်စုတစ်ခု ၏ အဆင့်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ အဆင့်များ၏ ဥပမာအချို့မှာ နယ်ပယ် (domain)၊ လောက (kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု (phylum)၊ မျိုးပေါင်း (class)၊ မျိုးစဉ် (order)၊ မျိုးရင်း (family)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစိတ် (species) စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
(ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ အဓိကအဆင့်ကြီး) (၈)ဆင့် ရှိသည်။ အခြား အဆင့်ခွဲငယ်များကို ဤနေရာတွင် မပြပါ။
ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကအဆင့်များ၊ နယ်ပယ်(Domain)၊ လောက(kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု(phylum)၊ မျိုးပေါင်း(class)၊ မျိုးစဉ်(order)၊ မျိုးရင်း(family)၊ မျိုးစု(genus)၊ မျိုးစိတ်(species)။ မြေခွေးနီ၏ ဇီဝမျိုးရိုးခွဲပုံအဆင့်များကို ဤပုံတွင် နမူနာအနေဖြင့် ယှဉ်ကြည့်နိုင်ရန် ပြထားသည်။
၁ အဓိက အဆင့်များ
၂ သတ္တဗေဒအသုံး အဆင့်များ
၃ ရုက္ခဗေဒအသုံး အဆင့်များ
ကားလ် လင်းနီးယပ် (Carl Linnaeus) သည် "Systema Naturae" ကဲ့သို့သော သူ၏ ထင်ရှားသော စာအုပ်များတွင် လောက (kingdom)၊ မျိုးပေါင်း (class)၊ မျိုးစဉ် (order)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစိတ် (species)နှင့် မျိုးစိတ်ထက် တစ်ဆင့်နိမ့်သော အဆင့်တစ်ခု (စုစုပေါင်း ၆-ဆင့်) ပါဝင်သော ခွဲခြားမှုစနစ်ကိုသာ အသုံးပြုသွားခဲ့သည်။
လက်ရှိခေတ်တွင်မူ အဆိုပါ ဇီဝဗေဒ၏ သိပ္ပံအမည်ပေးခြင်းကို အများသဘောတူ အမည်ပေးစည်းမျဉ်းစနစ်များဖြင့် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ကာ ပေးကြရန် သဘောတူထားသည်။ ထင်ရှားသော အမည်ပေးစည်းမျဉ်းစနစ်အချို့မှာ -
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေညှိ၊ မှို နှင့် အပင်အမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (International Code of Zoological Nomenclature)
တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့အရ အဓိကအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် (၇) ခုမှာ လောက (kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု (phylum)၊ မျိုးပေါင်း (class)၊ မျိုးစဉ် (order)၊ မျိုးရင်း (family)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစိတ် (species) တို့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းတို့တွင် မဖော်ပြထားသော်လည်း (ကားလ်ဝို့ဇ် (Carl Woese) မှအဆိုပြုထားသည့်) နယ်ပယ် (domain သို့မဟုတ် ဒိုမိန်း)ကို ယခုအခါ အခြေခံအဆင့်အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း နယ်ပယ် (domain သို့မဟုတ် ဒိုမိန်း) အဆင့်သည် ၁၉၇၄-ခုနှစ်တွင် မော (Royall T. Moore) မှ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော ဒမင်းနီယမ် (အင်္ဂလိပ်၊ dominion သို့မဟုတ် လက်တင်၊ dominium) နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူ စကားလုံးဖြစ်သည်။
အဓိက မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့်များ
လက်တင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
regio domain နယ်ပယ်
regnum kingdom လောက
phylum phylum (in zoology) မျိုးပေါင်းစု(သတ္တဗေဒအသုံး)
classis class မျိုးပေါင်း
ordo order မျိုးစဉ်
familia family မျိုးရင်း
genus genus မျိုးစု
species species မျိုးစိတ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (International Code of Zoological Nomenclature)တွင် မျိုးရင်းကြီး (superfamily)၊ မျိုးရင်း (family)၊ မျိုးရင်းသေး (subfamily)၊ မျိုးဇာတ် (tribe)၊ မျိုးဇာတ်သေး (subtribe)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစုသေး (subgenus)၊ မျိုးစိတ် (species)၊ မျိုးစိတ်သေး (subspecies) တို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမှ သိပ္ပံအမည်များကို "မျိုးရင်း-အုပ်စုအမည်များ"၊ "မျိုးစု-အုပ်စုအမည်များ"နှင့် "မျိုးစိတ်-အုပ်စုအမည်များ"ဟူ၍ အုပ်စုခွဲထားသည်။ ဤစည်းမျဉ်းတွင် အောက်ပါ မျိုးရိုးခွဲအဆင့်များကို အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေညှိ၊ မှို နှင့် အပင်အမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants) ၏ စာပိုဒ် ၃.၁ အရ အရေးကြီးဆုံး အဆင့်များမှာ လောက (kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု (division or phylum)၊ မျိုးပေါင်း (class)၊ မျိုးစဉ် (order)၊ မျိုးရင်း (family)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစိတ် (species) တို့ဖြစ်ကြသည်။ စာပိုဒ် ၄.၁ အရ ဒုတိယအဆင့်များမှာ မျိုးဇာတ် (Tribe)၊ section၊ series၊ varietyနှင့် form တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤစည်းမျဉ်းတွင် အောက်ပါ မျိုးရိုးခွဲအဆင့်များကို အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။
လောက (kingdom သို့မဟုတ် regnum)
မျိုးပေါင်းစု (division သို့မဟုတ် phylum သို့မဟုတ် divisio)
မျိုးပေါင်းစုသေး (subdivisio သို့မဟုတ် subphylum)
မျိုးပေါင်း (class သို့မဟုတ် classis)
မျိုးစဉ် (order သို့မဟုတ် ordo)
မျိုးရင်း (family သို့မဟုတ် familia)
မျိုးဇာတ် (tribe သို့မဟုတ် tribus)
မျိုးစု (genus သို့မဟုတ် genus)
မျိုးစိတ် (species သို့မဟုတ် species)
↑ Linnaeus၊ Carl (1758)။ Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (Latinဘာသာစကားဖြင့်) (10th ed.)။ Stockholm: Laurentius Salvius။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Turland၊ N.J.; et al., eds. (2018)။ International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017 (electronic ed.)။ Glashütten: International Association for Plant Taxonomy။ 2018-06-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (အကူအညီ).
↑ The Code Online | International Commission on Zoological Nomenclature။ 2020-10-04 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-10-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Moore, R. T. (1974). "Proposal for the recognition of super ranks". Taxon 23 (4): 650–652. doi:10.2307/1218807.
↑ Luketa, S. (2012). "New views on the megaclassification of life". Protistology7(4): 218–237.
↑ International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants – Melbourne Code (2012)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း_အဆင့်&oldid=714978" မှ ရယူရန်
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။